हिमनदीको पींधको तापक्रम माइनस तीन डिग्री सेल्सियस : नयाँ अध्ययन - Online Majdoor
हिमनदीको पींधको तापक्रम माइनस तीन डिग्री सेल्सियस : नयाँ अध्ययन
काठमाडौँ, २८ जेठ । पछिल्लो अध्ययनले नेपालका हिमनदीको पीँधको तापक्रम माइनस १० डिग्री सेल्सियसको हाराहारीसम्म छ भन्ने सोचाइलाई गलत सावित गरिदिएको छ । नेपालका हिमनदीमा पहिलोपटक गरिएको ‘हट वाटर ड्रिलिङ’ अध्ययनले हिमनदीको पीँधको तापक्रम माइनस एकदेखि माइनस तीन डिग्री सेल्सियसमात्र रहेको प्रमाणित भएको छ ।
हिमनदीमा हालसम्म गरिएका अध्ययनमा हिमनदीको पीँधको तापक्रम माइनस १० डिग्री सेल्सियसको हाराहारीसम्म हुन्छ भन्ने मान्यतामा आधारित थिए । ‘हट वाटर ड्रिलिङ’ अध्ययन नेपालको हिमालयन रिसर्च सेन्टरले बेलायतको लिड्स विश्वविद्यालयसँग मिलेर सन् २०१६ अप्रिलदेखि २०१९ अप्रिलसम्म गरेको थियो ।
सेन्टरका अध्यक्ष भूआकृतिक विज्ञ डा. धनञ्जय रेग्मीले भन्नुभयो, “हिमनदीको पीँधको तापक्रम नाप्दै जाँदा यथार्थमा माइनस एकदेखि माइनस तीन डिग्री सेल्सियस मात्र रहेको पाइयो । उच्च हिमाली क्षेत्रमा यसरी हिउँको तापक्रम मापन गरिएको यो पहिलोपटक भएको उहाँको भनाइ थियो । विश्वमा हालसम्म अन्टार्कटिका र अर्टिक क्षेत्रमा यसरी तापक्रम मापन गरिएको छ ।
अध्ययनमा तापक्रम मापन गर्ने उपकरणमात्रै रु. तीन करोडको थियो भने सबै उपकरण हेलिकप्टमार्फत सो क्षेत्रमा पु¥याइएकोले अध्ययन खर्चिलो भएको सेन्टरले जनाएको छ । अध्ययनमा विदेशी २० र नेपाली १० गरी ३० वैज्ञानिक टोलीको सहभागिता थियो । अनुसन्धानमा वैज्ञानिक टोलीबाहेक अन्य थुप्रै सहयोगी समूहसमेत रहेको सेन्टरले जनाएको छ ।
वैज्ञानिक टोलीले नेपालको सबैभन्दा चिसो क्षेत्र सगरमाथाबाट बगेको खुम्बु हिमनदीको अध्ययन गरेको थियो । टोलीले खुम्बु हिमनदीको सगरमाथा आधार शिविरसम्म विभिन्न स्थानमा ड्रिल गरेर तापक्रम नापेको थियो । सो क्रममा १९२ मिटर गहिराइसम्म नाप्दा पनि माइनस तीन डिग्री सेल्सियसमात्र तापक्रम भेटिएको अध्ययनमा संलग्न बेलायतको लिड्स विश्वविद्यालयका डा. डङ्कन क्युइन्सीले जानकारी दिनुभयो ।
हिमनदीको पीँधको तापक्रम माइनस एकदेखि तीन डिग्री सेल्सियससम्म भेटिएको डा. डङ्कन क्युइन्सीले बताउनुभयो । यस अनुसन्धानले हिमनदीको माथिल्लो तहले केही कुराले रोकेर पग्लिनबाट रोकिए पनि जियोथर्मल (भूतापक्रम) ले पग्लिने क्रम बढी छ भन्ने निष्कर्ष निकालेको छ ।
डा. क्युइन्सीले भन्नुभयो, “खुम्बु हिमनदीका विभिन्न २७ स्थानमा ड्रिल गरेर ५० देखि १९२ मिटरसम्म गहिराइमा जाँदा पनि माइनस तीन डिग्री सेल्सियसभन्दा बढी तापक्रम देखिएन ।” टोलीले मेसिनमार्फत पाइपबाट तातो पानीको वाफले हिउँमा हानेर ड्रिल गरेको थियो ।
बरफ पगाल्दै हिमनदीमा ड्रिल गरिएको र खाल्डोबाट पग्लेको पानी बाहिर निकाल्दै सो खाल्डोमा उपकरण र क्यामेरा राखेर हिउँको भित्री भागको बनावट र संरचनाका बारेमा समेत अध्ययन गरेको डा. क्युइन्सीले जानकारी दिनुभयो ।
विभिन्न चरणमा गरिएको अध्ययनमा पटक–पटक तथ्याङ्क लिँदै पुष्टि गर्दै गरिएको २० वर्षदेखि निरन्तर हिमालय क्षेत्रको अनुसन्धानमा संलग्न सेन्टरका अध्यक्ष डा. रेग्मीले बताउनुभयो । यस अध्ययनको अनुभवले नेपाली वैज्ञानिकको आफैं अध्ययन गर्नसमेत क्षमता अभिवृद्धि भएको छ । “अध्ययनको निष्कर्ष हेर्दा हिमनदी जतिखेर पनि पग्लेर जान सक्छन् । खतराको घण्टी बजाएको छ । सोचेभन्दा छिटो पग्लिन सक्छ”, अध्यक्ष डा. रेग्मीले भन्नुभयो ।
हिमनदी छिट्टै पग्लिने र हिमताल फुट्ने खतराको सम्बन्धमा वैज्ञानिक टोलीले त्यस्ता ताललाई जलविद्युत् आयोजना, सिँचाइ, खानेपानीलगायत क्षेत्रमा उपयोग गरी खतरा कम गर्न सकिने सुझाव दिएका छन् । हिमनदीको प्रतिक्रिया नै जलवायु परिवर्तनको सङ्केत भएको अध्ययन टोलीमा संलग्न इसिमोडका अनुसन्धानकर्ता तेन्जिङ शेर्पाले बताउनुभयो । उहाँले विश्व तापमान वृद्धिले हिमनदी र हिमताल बन्ने र पग्लिने क्रमको परिवर्तन आएको जानकारी दिनुभयो ।
नेपालका हिमनदीको गहिराइ हेर्दा अहिलेसम्मको अध्ययनमा इम्जा हिमतालमाथिको ल्होत्सेसार हिमनदीको सबैभन्दा बढी २५० मिटर देखिएको छ । पछिल्लो अध्ययनअनुसार नेपालमा करीब एक हजार ४०० हिमताल र तीन हजारको हाराहारीमा हिमनदी छन् ।